Ciidamo Itoobiyaan ah oo saakay weerar Gaadmo ah lagu qaaday iyagoo marayay Deegaano ka mid ah Degmada Buur Hakaba. – Balcad.com Teyteyleey
Deegaanka Jameeca Mubaarak oo u dhexeeya magaalada Baydhabo iyo Degaanka Leego Islamarkaana Hoostaga Degmada Buur Hakaba ee Gobolka Bay, waxaana la sheegayaa in saakay Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka tirsan Howlgalka AMISOM lagu Weeraray Deegaankaasi.
Ugu horyntii ayaa la sheegay in Weerarka uu ku biloowday sida Wararku ay sheegayaan Qarax Miino oo loo dhigay Ciidamada Itoobiya oo Marayay Degaanka Jameeca Mubaarak,waxaana Qaraxa Xigay weerar fool ka fool ah oo Shabaabku ku qaadeen Ciidamada Itoobiya.
Dhanka kale Ciidamada Itoobiyaanka ah ee la Weeraray ayaa ka baxay Degaanka Leego Ee G/ Sh/ Hoose,waxaana la sheegay in Magaalada Baydhabo ay ku sii jeedeen kolanyada la weeraray, mana cadda You can buy your xenical for only 1.11 USD, so don’t waste another minute searching and take advantage of our premium offer! cid xaqjin karta Khasaaraha soo kala gaaray Al-Shabaabka iyo Ciidamada Itoobiya ee Weerarka lagu qaaday.
Dowladda Jarmalka oo Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan 70-milyan oo Euro